Tuesday August 04, 2015 - 17:17:16 in Wararka by Web Admin
Inta lagu guda jiray Koobka Kubadda Cagta Ee Dhalinyarada Caalamka Oo kasocday dalka Norway ee loo yaqaano (Norway Cup) oo ee kasoo qeybgaleen kooxo kala gedisan ayaa waxa mas'uuliyiinti ka qeybgashay ka mid ahaa Xildhibaanka Soomaalida ee laga
Inta lagu guda jiray Koobka Kubadda Cagta Ee Dhalinyarada Caalamka Oo kasocday dalka Norway ee loo yaqaano (Norway Cup) oo ee kasoo qeybgaleen kooxo kala gedisan ayaa waxa mas'uuliyiinti ka qeybgashay ka mid ahaa Xildhibaanka Soomaalida ee laga soo doorto golaha deegaanka ee Magaalada Trondheim, Ismaaciil Maxamed Muxudiin.
Xildhibaan Ismaaciil oo indhawaalaba astaan u ahaa dhiiro gelinta iyo wacyi gelinta bulshada laga tirada badan yahay ee kunool dalka Norway gaar ahaan Soomaalida, ayaa waxa uu kulan taageero iyo dhiiro gelin isugu jirtay la qaatay maamulka iyo ciyaartoyada koox kuciyaareesay Magaca Soomaaliya oo laga soo kala xulay gobolada dalka Soomaaliya iyagoo kaalinta 3.aadna kagalay tartanka taasi oo sharaf iyo yadidiilo u aheed guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan Soomaalida Norway.
Xildhibaanka ayaa ku dhiiro geliyay maamulka kooxda iyo ciyaartoyadaba in dadaalkooda halkaa kasii wadaan isagoo dhanka kalena ubalan qaaday ka xildhibaan ahaan inuu garab taagan yahay dhiiro galinta dhalinyarada iyo is dhaxgalka bulshada kuwada nool wadanka Norway.
Tartankaan aadka uxiisaha badnaa oo ee isaga hor yimaadiin dhalinyaro isaga kala yimid daafaha caalamka ayaa waxa uu xildhibaanka kamid yahay mas’uuliyiinta sida gaarka ah uga soo qeybgalo tartankaani sanad walba isagoo soo hogaamiya koox ka kooban dhalinyarada kasoo jeedo qowmiyadaha laga tirada badan yahay oo ee qeyb ka yihiin dhalinyaro Soomaalida kuwaasi oo ka dhisan magaalada Trondheim ee dalka Norway.
Xildhibaan Ismacil ayaa ah shaqsi ee ku daydaan bulshada laga tirada badan yahay ee kunool magaalada Trondheim, isagoo lagu xasuusto in sanadki 2007-Komuunaha Trondheim uu gudoon siiyay abaal marinti ugu horeysay oo ku guuleesto muwaadin kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay, taasi oo unoqotay sharaf guud ahaan shacabka Soomaalida ee kunool dalka Norway gaar ahaan magaalada Trondheim.
hadaba warbaahinta dalka Norway oo si aad ah uga hadashay waxqabadka xildhibaanka iyo doorkiisa muhiimka ah ee bulshada ayaa waxa kamid ah warbaahinta ka hadashay , Tvga caanka ah ee NRK.
halka hoose ka aqri qaar kamid ah warbixinadaasi